Ny fanaovana ny tranga ho an'ny WordPress ao amin'ny orinasa: Tombontsoa sy fatiantoka | Martech Zone
Ny fanaovana ny tranga ho an'ny WordPress ao amin'ny orinasa: Tombontsoa sy zavatra maharatsy
Zoma, Jona 24, 2016 Talata, Novambra 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org dia mitombo ao amin'ny orinasa, ampiasaina amin'ny indostria lehibe rehetra ankehitriny. Mampalahelo fa ny orinasa lehibe dia mbola manalavitra ny WordPress noho ny lazany amin'ny maha orinasa kely na sehatra bilaogy mahaleo tena. Tao anatin'izay taona lasa izay, natokana WordPress nahomby fampiantranoana nivoatra ny sehatra. Nifindra tany Flywheel ho an'ny Martech Zone ary faly tamin'ny valiny.
Misy ny mahatsara sy maharatsy ny fampiasana WordPress ao amin'ny Enterprise. Ampitoviko amin'ny hazakazaka ny traikefa amin'ny WordPress. Manana fiara (WordPress) ianao, mpamily (ny mpiasao), ny moterao (lohahevitra sy plugins), ary ny hazakazanao (fotodrafitrasao). Raha tsy misy ny iray amin'ireto singa ireto dia very ny hazakazaka. Nahita orinasa lehibe maro tsy nahomby tamin'ny fifindra-monina WordPress izahay ary manome tsiny ny WordPress; Na izany aza, tsy mbola hitantsika ny tena olana WordPress.
Ny mahatsara ny WordPress ho an'ny orinasa
Training - Raha mila fanampiana ianao dia manana loharano an-taonina ny WordPress.org, manana horonan-tsary an-taonina ny Youtube, misy programa fampiofanana manerana ny tranonkala, ary valiny an-tapitrisany no vokarin'i Google. Tsy lazaina intsony ny antsika WordPress articles, mazava ho azy.
Fampiasana mora foana - Na dia mety tsy ho tsotra aza amin'ny voalohany ho an'ny fanaingoana azy, ho famoahana haingana ny famokarana atiny WordPress. Matanjaka izaitsizy ny tonian-dahatsoratr'izy ireo (na dia manahirana ahy aza izany fa ny lohateny sy lohanteny h1, h2, ary h3 dia mbola tsy tafiditra ao anaty kaody).
Fahazoana loharano - Ny fitadiavana loharanom-pampandrosoana CMS hafa dia mety ho fanamby lehibe, saingy miaraka amin'ny WordPress dia hatraiza hatraiza. Fampitandremana: Mety ho olana ihany koa izany… misy maro ny mpamorona sy masoivoho izay mamorona vahaolana tena mahantra any amin'ny WordPress.
Integrations - Raha manandrana manampy endrika ianao na mampiditra zavatra saika, dia matetika no ahitanao ny fampidirana novokarina tao amin'ny WordPress. Mikaroha ny lahatahiry plugin nomena alalana na tranokala toa Code Canyon, tsy dia misy zavatra tsy ho hitanao!
Customization - Ny lohahevitra, plugins, widgets ary karazana post an'ny WordPress dia manome fahafaha-mandanjalanja tsy manam-petra. Miasa mafy ny WordPress hanana andiana API izay manodidina ny lafiny rehetra amin'ny lampihazo.
Ny fatiantoka ny WordPress ho an'ny orinasa
Optimization - WordPress dia tsara ivelan'ny boaty raha ny momba ny fanatsarana motera fikarohana, saingy tsy dia tsara. Vao tsy ela akory izay dia nanisy sitemap ho azy ireo izy ireo Jetpack plugin, saingy tsy dia matanjaka toa an'i Plugins SEO an'ny Yoast.
Performance - Ny WordPress dia tsy manana fanatsarana ny tahiry ary ny cache amin'ny pejy, saingy afaka mamorona izany mora foana ianao amin'ny alàlan'ny fampiasanao Host Managed WordPress. Mila vahaolana aho raha te hanana backup automatique, cache amin'ny pejy, fitaovana fitahirizam-bokatra, log error ary virtualisation mba hiantohana ny fahombiazanao.
Internationalization (I18N) - WordPress antontan-taratasy ny fomba fanamoriana ny lohahevitrao sy ny plugins anao, saingy tsy manana ny fahaizana mampiditra ny atiny voafantina amin'ny rafitra. Nampihatra izahay WPML noho izany ary nahita fahombiazana.
Security - Rehefa mampiasa 25% -n'ny tranonkala ianao dia lasibatra goavambe amin'ny hacking. Averina indray, ny sasany amin'ireo fampiantranoana tantanana dia manolotra plugin vaovao sy fanavaozana ny lohahevitra rehefa mipoitra ny olana ara-piarovana. Manoro hevitra mafy aho ny amin'ny fananganana lohahevitra ho an'ny zaza mba hahafahanao manohy manavao ny lohahevitra ray aman-dreny tohananao mba tsy hampidi-doza ny tranokalanao amin'ny lohahevitra izay tsy azo havaozina.
Base Base - Ny lohahevitra dia novolavolaina matetika ho an'ny endrika tsara, saingy tsy misy fivoarana be pitsiny ho an'ny hafainganana, fanatsarana ary fanaingoana. Mety hampihena ny fomba tsy mampivoatra ny plugins sy ny lohahevitra. Matetika izahay mahita ny tenantsika manoratra ny fampiasa amin'ny lohahevitra (antony iray hafa hampiasana lohahevitra ho an'ny ankizy).
backups - Manolotra vahaolana karama i WordPress, VaultPress ho an'ny backup any an-toerana fa gaga aho amin'ireo orinasa maro no tsy mahatsapa fa tsy fampiasa ivelan'ny boaty izy io ary mila omen'ny mpampiantrano anao na serivisy fanampiny.
Mandroso miaraka amin'ny orinasa salantsalany sy lehibe ny WordPress, ireto misy statistika vitsivitsy Pantheon.
Tags: orinasaorinasa wordpressWordPresswordpress consmpomba ny wordpressmpomba ny WordPress sy ny lafy ratsy
Pantheon: Serious WordPress na Drupal Hosting miaraka amin'ny New Relic